Colon cancer: ihe mgbaàmà 7 iji hụ "onye iro" a na - adịghị agbachi nkịtị - SANTE PLUS MAG - TELES Relay
Ọrịa colon: ihe mgbaàmà 7 iji hụ "onye iro" a na - agbachi nkịtị - SANTE PLUS MAG
Na-emetụta ụmụ nwoke na nwanyị, ọrịa cancer na-egbuke egbuke nwere ike igosipụta na eriri afọ ma ọ bụ ikensi. Nchọpụta mbụ, ọgwụgwọ ahụ dị irè karị. Dabere na Prọfesọ Michel Ducreux, Isi nke ngalaba digestive digestive na Gustave-Roussy institute, ọgwụgwọ ahụ ga-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 9 n’ime mmadụ iri mgbe achọpụtara ya n’oge zuru oke. Nke a bụ isi ihe ọmụma iji cheta, na-enyefe yaNational Cancer Institute na France.
Ọrịa cancer - Isi mmalite: Forbes
Ọkpụkpụ afọ, ihe ịchọrọ ịma
Ọrịa cancer eriri afọ bụ ọrịa nke mkpụrụ ndụ na-etinye n'ime mgbidi nke mpaghara aha. Iji nwee ike tolite, sel nkịtị kwesiri inwe mgbanwe, baakwa ụba n’adighi ike, nke ga - ebute ọrịa ọjọọ. Na mmalite nke ọrịa, mkpụrụ ndụ cancer na-ejide na mkpuchi. Ya mere, anyị na-ezo aka na ihe a na-akpọ ọrịa kansa na ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ahapụghị nke ikpeazụ ahụ, akpụ ndị ọzọ n'ime mgbidi ahụ na-amalite ịmalite ọrịa ahụ, na-ebute ọrịa kansa. N'ọnọdụ ndị ọzọ, mkpụrụ ndụ kansa nwere ike gbasaa n'èzí ahụ, na-agafe ọbara ma ọ bụ arịa lymph. Ha nwere ike imetụta imeju, ụbụrụ, peritoneum, ọkpụkpụ, ma ọ bụ ọbụna lymph n'akụkụ dị n'akụkụ eriri afọ. Anyị na-ekwukwa banyere metastases iji kọwaa nguzo etuto ọhụrụ ndị a. Ọganihu nke ndị dọkịta na-enyocha nke ọma n'oge nchoputa iji chọpụta ọgwụgwọ kachasị mma maka ọnọdụ onye ọrịa ahụ.
8 ugboro n'ime 10, mmepe nke eriri afọ emere ya site na akpụ akpụ. Anyị na-ekwu maka adenoma ma ọ bụ adenomatous polyp. Ọrịa ndị a na-anaghị arịa ọrịa anaghị adịkarị njọ, mana na 2 ruo 3% nke ikpe ha na-emecha too ma too ogo ma ghọọ kansa. Usoro nke ga-ewe ihe karịrị afọ iri na nkezi, dị ka Institute.
Na mbu, enwere ike ịghara inwe ihe mgbaàmà ọ bụla n’ihi na ọrịa a ka na-amalite amalite. Ọtụtụ mgbe, mmetụta anụ ahụ na-apụta ka etuto ahụ na-aga n’ihu. Rịba ama na ọrịa ndị ọzọ nwere ike ibute mgbaàmà ndị yiri nke kansa cancer, yabụ mkpa ọ dị ịchọ ndụmọdụ ahụike iji wepụ ihe kpatara nsogbu ọ bụla.
A ghaghị nyochaa ndụ ahụike dị mma - Isi mmalite: Ahụike Kwa .bọchị
Ihe na-akpata ya na ihe ndị butere ọrịa cancer
A na-ewere afọ dị ka otu n'ime ihe ndị nwere ike ịkpata kansa cancer. Na ezi ihe kpatara ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ndị emetụtara karịrị afọ 50 dị ka Dr Mathilde Soule, dọkịta na-awa nri na Paris. Anyị kọwaa ihe ọzọ Nsogbu ato nke di na nwunye:
- Nnukwu ihe egwu: il nchegbu ndị nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa dị ka ezinụlọ adenomatous polyposis ma ọ bụ ọrịa Lynch.
- Nnukwu ihe ize ndụ: ọ na-emetụta ndị na-ese anwụrụ ọkụ, ndị nwere ezinụlọ ma ọ bụ akụkọ banyere onwe ha banyere ọrịa cancer na-egbu egbu, yana ndị nwere ọrịa ịrịa afọ na-adịghị ala ala dịka ọnya afọ ma ọ bụ ọrịa Crohn.
- Ọkara dị egwu: Ọ gbasara ndị karịrị afọ iri ise.
Ya bụ, mgbe a na-enyo mmadụ enyo na ọ ga-ebute ọrịa kansa, ndị dọkịta na-agbaso ma na-ezo aka onye ọrịa na oncogeneticist maka nyocha usoro iwu. Ọ bụrụ na enwere ihe nketa na mkpụrụ ndụ ihe nketa, a ga-enye ndị otu ezi na ụlọ ahụ nnwale nyocha.
Dị ọcha nke ndụ na-esonye ma nwee ike inwe mmetụta na ọnọdụ nke ọrịa kansa. Nke a bụ ihe anyị na-akpọ ezere ihe ize ndụ. N'etiti ha :
Ndụ izu ike na arụ ọrụ nkịtị
Consumptionba ụba oriri nke anụ uhie
A nri oke ọgaranya na abụba anụmanụ
Ahụ ike mkpuchi ego: gịnị ka ọ na-ekpuchi? - Ahụ ike gbakwunyere ...
Otu nwatakịrị afọ 3 nwụrụ n'ụzọ dị egwu mgbe ọ risịrị sandwich ...
Kedu otu esi ekpochapụ ndanda na-enweghị ọgwụ ahụhụ? ...
Mgbaàmà nke ọrịa kansa na-akpata ọrịa-Isi mmalite: Ahụike kwa ụbọchị
Ọrịa 9 na-arịa ọrịa eriri afọ iji lezie anya
Ọ bụrụ na mmalite ya na-adịkarị nwayọ ma ọ bụghị nke na-egosi oke ihe, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmara mgbaàmà ndị metụtara ọrịa ahụ iji mee ngwa ngwa maka ezigbo njikwa. National Cancer Institute kwuru 9 ihe ịrịba ama iji lezie anya ịkpọtụrụ dọkịta gị ngwa ngwa:
Ọnụnọ ọbara dị na stool
Akọwapụtaghị ihe mgbu afọ
Afọ ọsịsa na-adịru ogologo oge
Afọ ntachi na mberede ma ọ bụ na-aka njọ
Ọnọdụ ọzọ nke afọ ntachi na afọ ọsịsa
A uka mgbe palpating afo
Agụụ na-aga n'ihu ka ị nwee eriri afọ
Ọbara anaemaghị ihe kpatara ya
Ọdịmma nke ahụike na-egosipụta ike ọgwụgwụ, enweghị agụụ, ọnwụ ma ọ bụ ihe isi ike na nri
A na-enyo enyo na a na-enyo enyo na colonis mgbe a na-achọ ya ọbara na stool na-enye nsonaazụ dị mma.
Gbochie oke oria site na nyocha
N'agbata afọ 50 na 74, nyocha kwesịrị ịme kwa afọ abụọ. N'ezie, ule a na - abawanye ohere chọpụta ọrịa ahụ na mbido iji wepu polyps ndị na-abụghị nke nwere ọrịa ma ọ bụ na-agwọ kansa ọsịsọ ma ọ bụrụ na achọta ya. Usoro mmemme a haziri ahazi na-emetụta ndị mmadụ na-enweghị ihe mgbaàmà ọ bụla jikọrọ ya na ọrịa kansa na ndị na-enweghị amụma jikọrọ ezinụlọ ha ma ọ bụ akụkọ banyere onwe ha.
Gbochie Ọrịa Canlon - Isi Iyi: Ahụ Ike Kwa .bọchị
Ọrịa colon cancer: otu esi echebe onwe gị kwa ụbọchị?
Ọ bụ ezie na enwere ihe ndị dị egwu karịrị ike anyị, enwere ike ịchịkwa omume ndị ọzọ iji belata ohere nke ịmalite ịrịa ọrịa kansa. Ndị a na-agụnye ihe ndị nwere ike igbochi egbochi, ihe ka ọtụtụ n'ime ha metụtara ndụ anyị. N'ihi nke a, Dr Soule na-adụ ọdụ ka chebe akụkụ nri gị site na itinye usoro ndị a:
- Dịkwuo gị oriri oriri: Mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ọka niile, ngwaahịa ọka, na mkpo, na-enweta ọtụtụ eriri dị ka ọ na-enyere aka ịgbakwunye usoro nri na-enye aka mee ka usoro nri gị gbasie ike. nwere mgbe nile nsia n'ụzọ. Ha na - enyere aka ịkwalite mmegharị nke nri na colon ma bulie olu nke stool, na mgbakwunye na-edozi microbiota (nje dị mma na colon).
- Amachi oriri nke anụ uhie, oyi na nri ndị nwere abụba anụmanụ.
- Agbachi ị yourụbiga mmanya oke nke na-anọchite anya ihe mgbochi 2 na-akpata ọnya cancer.
- Kwụsị ise siga nke, na mgbakwunye na ịbawanye ihe ize ndụ nke ọtụtụ pathologies, na-akwalite omume nke kansa cancer.
- Tufu ibu ma obu oke ibu na-enyochakwa BMI ya (nchịkọta anụ ahụ)
- Mụọ mmega ahụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile maka ọnọdụ ahụike ya.
Dị ka a akwụkwọ nke Arc Foundation for Cancer Research, ihe ize ndụ nke ọrịa cancer nke na-eme na ndị na-eme mmega ahụ siri ike bụ 18% dị ala karịa ụmụ nwoke na 20% na ụmụ nwanyị, ma e jiri ya tụnyere isiokwu ndị mmega ahụ pere mpe. Otu echiche so na Dr. Soule onye na-echeta na "mmega ahụ nwere mmetụta nchekwa n'ọtụtụ ọrịa, ọkachasị n'ọrịa cancer eriri afọ".
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/cancer-du-colon-7-symptomes-pour-reperer-cet-ennemi-pas-si-silencieux/
Assinalam-se amanhã, sábado, 27 de Fev, primeiros 12 meses de mandato. - Vidio
site na Morocco rue Senegal, kedu ndị bụ ndị mmeri nke Africa? - Nwa okorobịa Africa
Inye mkpuchi ahụ ike: gịnị ka ọ na-ekpuchi? - AHUIKE tinye MAG
Otu nwatakịrị nwanyị dị afọ 3 nwụrụ n'ụzọ nwute mgbe ọ riri sanwichi n'ụlọ akwụkwọ -…
Gịnị na-eme n'ụbụrụ anyị mgbe anyị na-enwe mmekọahụ? - AHUIKE ...